Phenibut waxaa loo isticmaalaa in Russia sida daroogada ah dawooyinka si loo daaweeyo tiro balaadhan oo ah nno, oo ay ku jirto welwelka, niyad-jabka, asthenia, hurdo la'aan, Khamriga, disorder qoonmay, rafaad, iyo vestibular disorders.In qaybo badan oo kale oo dunida ah, phenibut aan la ansixiyay loo isticmaalo bukaan eegida, a ... more Read »
HTA waa xarunta a phenolic. Saldhig Hydroxytyrosol waxaa inta badan laga helaa saytuunka Intaa waxaa dheer plant.The of koror copolymer hydroxytyrosol sida bioavailability. Hydroxytyrosol waa mid ka mid ah supplements ugu caafimaadka gacanta xoogan ee la helayo. Gargaarka dheeraadka ah waxaa ka mid ah sideeda oo jidhka iyo suppleme ... more Read »
Curcumol waa monomer daahir ka Rhizoma Curcumaeis go'doonsan hawlaha antitumor. Waa anti-bararka iyo wakiilka antiproliferative. Gudhiyay LP-laaluusheen saarka NO by xakamaynayaan hadal iNOS mRNA. more Read »
Isoxepac waa horumarsan dhexe ee Olopatadine, Olopatadine waa xasaasiyadda ah (iyo sidoo kale anticholinergic oo ay daqal stabilizer cell), iibin sidii dhibic isha qoro macmalay by Alcon in mid ka mid ah sadexda waxyaabood: xal 0.7% ama Pazeo oo dalka Mareykanka ah, 0.2% xal ama Pataday (oo sidoo kale Cal ... more Read »